ထူးဆန်းသော ဟင်းသီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ထူးဆန်းသော ဟင်းသီး
Posted by saund on Sep 10, 2010 in Food, Drink & Recipes |9comments
Opuntia Nopales Nopales ထူးဆန်းသော ဟင်းသီး
ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ နေရာ ဒေသအလိုက် တွေ့ ရှိရတဲ့ သဘာဝ သစ်ပင် တောတောင် ရှုခင်းနဲ့တိရိစ္စာန် တွေဟာ လေ့လာ လို့ မကုန် နိုင်ပါဘူး။
ဒီနေ့ ဆိုင်တဆိုင်က နီရဲနေတဲ့ သစ်သီးတွေ ရှေ့ မှာ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့စားချင်လို့ ပူဆာနေတဲ့ ၅နစ် အရွယ် ကလေးမလေး ကြောင့် အဲဒီ သစ်သီးကို ၀ယ်လိုက် ပါတယ်။ အသီးနာမည်က prickly red pear လို့ ရေး ထားပါတယ်။ ၁ပေါင်ကို ၃၉ပြားနဲ့ ၂လုံး ကို ၁ဒေါ်လာ နဲ့ ဝယ်လာပါတယ်။ အသီးပုံစံက မြန်မာနိုင်ငံက ရွက်ယိုသီး လို အဖုအထစ်လေးတွေနဲ့ ပါ။ ကြက်သွေး နီရောင်နဲ့ အရည်ရွမ်းလဲ့နေတဲ့ပုံပါ။ အသီးကို ထက်ခြမ်း ခွဲတဲ့ အခါမှာ အခွံအပြင်နားကပ်ရက် ပတ်လည် ၀.၅လက်မ လောက် က လွဲရင် အတွင်းမှာ (ရွက်ယိုစေ့တွေလိုဘဲ) အစေ့အနီလေးတွေ မွနေပါတယ်။ အစေ့လေးတွေကိုတော့ မစားတတ်လို့ထွေးထုတ်ရတဲ့ အတွက် အသီးကို စားရင် အပျင်းပြေသဘော စိမ်ပြေနပြေ စားချင်တဲ့အခါအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အရသာက အစေ့များတဲ့ အလယ်ပိုင်းက ပိုချိတယ် အခွံနားက အသားတွေက သင်္ဘောသီး နဲနဲ မာသလို အချိုအနည်းငယ်ပေ့ါ ပါတယ် (ခရမ်းချဉ်သီးအရသာနဲ့မတူပါဘူး)။ အနံ့မရှိပါဘူး
အနီရောင်ဖြစ်လို့ဆေးဘက်ဝင်ပါတယ်။ ဂျယ်လီ၊ သကြားလုံးနဲ vokda lemonade ဖျော်ရည်ထဲမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြု ပါတယ်။ အသီးကထွက်တဲ့ အစေးကိုလည်း hair conditionar မှာ သုံးပါသေးတယ်။ အမျိုးနွယ်များထဲက တချို့ မျိုးနွယ် အသီးဟာ အစားသောက်ပျက်တာ ကာကွယ်စေခြင်း။ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ ခြင်း လျော့နည်း စေတယ်လို့သိပံပညာရှင် တချို့ က တွေ့ ရှိရပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည်ကို အစာလမ်းကြောင်း အနာယောင်လျော့စေခြင်း အတွက် သုံးတတ်ကြပါတယ်။
Opuntia အပင်ကလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဘက်တမင်တန်ပုံယပ်တောင်ကြိးမှာ အဆူးတွေ ဖြာထွက်နေတဲ့ အပင်တွေဟာ မထိရဲ မကိုင်ရဲ စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ အရွက် (Nopales) ပေါ်က ဆူးတွေကို သင်၊ မီးမြိုက်ပြီး တောက်တောက်စင်း ကြက်ဥနဲ့ ရော ကြော်လိုက်ရင် ပဲသီးကြက်ဥအရောကြော် အရသာနဲ့ တူတဲ့ ဟင်းတခွက် ရပါမယ်။ မက်ဆီကန်တွေရဲ့ တခြားသော ဟင်းလျာတွေထဲမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အရွက်တွေမှာ ဆီးချိုရောဂါ လျော့နည်းစေတဲ့ ဓါတ်ပါဝင်တာလည်း တွေ့ ရပါသေးတယ်။ မက်ဆီကန် လူမျိုးတွေကတော့ အရက်ဖျော်ရည် လုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ အရက်ပြန်လုပ်ရာမှာ လည်း သုံးတာ တွေ့ ရပါသေးတယ်။ Nopales အရွက်တွေမှာ ဗီတာမင် အေ ဘီ၆ စီ ကေ နဲ့သတ်တုဓါတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အစမ်းဝယ်လာတဲ့ Nopales ကို ချက်ဖို့ လုပ်ပေမဲ့ အဆူး စူးမှာစိုးလို့နောက်မှ ခုတ်ထစ်ပြီးသားကို ၀ယ်စမ်းချက်ကြည့် ပါအုန်းမယ်။
လင့်လေးတွေ နှိပ်ကြည့်ရင် ၀ီကီမှာ အသေးစိတ် အချက်လက် တွေကို လေ့လာ ဖတ်ရှု့ နိုင်ပါတယ်။ မတွေ့ ဖူး မမြင်ဖူး မစားဖူး တဲ့ ကျမ အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အသီး အရွက်နဲ့ အပင်အကြောင်း ဗဟုသုတ ရ လိုက်ပါ တယ်။
စာကိုဖတ်မိတော့ သလဲသီးကိုပြောနေတယ်ထင်တာမို့ .. ပုံကိုပါရှာကြည့်ပြီး..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မက်ဆီကန်တွေရဲ့ ဆိုင်တွေမှာ တွေ့ဖူးတဲ့ အသီးပဲ။ ကြည့်ရတာ desertပင်တမျိုးပဲ ထင်ပါတယ်။
အသီးတွေက စားချင်စိတ်တောင်ကုန်စေတယ် ။ အသွင်ပြင်ကြမ်းလွန်းလို့ ။ ကန္တာရအသီးလားအောက်မေ့ရတယ် ။
မတွေ့ ဖူး သေးလို့ ပါ အိတုန်ရေ. အသီးတွေက ပုံထားရင် လှက လှနဲ့ ။ အရောင်လေးတွေက ရဲလို့စိတ်ထားရင် ရွန်းလဲ့ပြီး အရည်အိကျ မယ်တောင် ထင်ရပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူတွေများ အလွန်ကြိုက်ကြတာ။ ချာတိတ်မလေးဆို ၀ယ်မပေးရင် ဆိုင်ထဲက မထွက်ဘူးဆိုလို့ သူ့ အမေက ၀ယ်ကျွေးရပါတယ်နော်။
အိမ်မှာ အသီးတလုံး ရှိနေတယ် မစားရသေးဘူး အားရင် ဓါတ်ပုံရိုက် တင်ပေးမယ်။ ပုံတွေ့ ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားမယ်။ အပင်ကို ဒီအတိုင်းကြည့်ရင်တော့ ဆူးကို လန့် စရာ ဖြစ်တာပေ့ါ။ အသီးကိုဘဲ ကြည့်ရင် သွားရည်ယိုစရာရယ်။
ဘာအသီးကြီးတွေလဲမသိဘူး အဲအသီးတွေကစားလို့ ကောင်းပါ့မလား အဲလိုထူးဆန်းတဲ့အသီးတွေကိုစားတဲ့လူတွေကလဲရှိသေးတယ်နော် လူတွေကတက်က်ိုတက်နိုင်လွန်းပါတယ်ဗျာ……………….
ဒို့ များရွာက ဒူးရင်းသီးကြီးလိုပေါ့
ကျီးအာသီး လှလှလေးကလဲ စားလို့ ရဘူးနော်
ဂျာနယ်ထဲမှာတစ်ခါဖတ်ဖူးတယ် ကျနော်တို့ ဆီမှာ အဲဒီအပင်ကို
ကျားလျှာပင်လို့ ခေါ်တယ် အပူများတဲ့ဒေသတွေမှာပေါက်တယ်
အပွင့် ပွင့်တာတော့မြင်ဖူးပီး အသီးကိုတော့ခုမှမြင်ဖူးပါတယ်
ဘာသီးကြီးလည်း မသိပါဘူးဗျာ။ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတော့ မျိုးသုန်းအောင်ခူးပြီး ဆေးဖော် မဲ့လူတွေ ပေါ်ထွက်လာမှာပေါ့ဗျာ။
ဒီမှာ ဂျုးတွေ သိပ်ကြိုက်။ တခါတလေ ဈေးမှာပုံနေတာပဲ ရောင်းတာ။ သူတို့ဘာသာ ဈေးရောင်းလိုက် ပါးစပ်ထဲ ကောက်ထည့် ၀ါးလိုက်နဲ့ ကိုယ်သာ မစားရဲတာ။ ကန္တာရထဲမှာဆို အပင်တွေမှာ သီးနေတာ အပင်စိမ်းပေါ်မှာ အသီးကအနီရောင်ဆိုတော့ လှတောင်လှသေး။
အော် ခုလိုသိရတော့ မမရေ ကျေးဇူးနော်။ခုမှတွေ့ ဖူးလို့ ။